Amụma na nloghachi amụma
Anyị nwere olile anya na ị hụrụ nzụta gị n'anya SarmsStore. Agbanyeghị, ọ bụrụ na afọ ojuju adịghị gị na nzụta gị, ma ọ bụ na o mezughi ihe ị chọrọ, ịnwere ike weghachitere anyị ya.
A ghaghachighachi ihe na udi ọnọdụ ha na nkwakọ ngwaahịa ha, n’ime mkpụrụ ụbọchị iri na anọ nke ụbọchị ị natara ya. Anyị nwere ike ịnye mgbanwe ma ọ bụ nkwụghachi zuru ezu maka ọnụahịa ị kwụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eweghachitere anyị ngwaahịa maka na ezighi ezi, anyị ga-akwụghachite ụgwọ nzipu ozi gị ma ọ bụrụ na ihe ahụ ezighi ezi site na njehie anyị ọ bụghị ma ọ bụrụ na iji aka gị enye iwu ngwaahịa ahụ.
Iwu nkwụghachi ụgwọ a anaghị emetụta ikike gị.
Biko rụba ama: Nloghachi na usoro mgbanwe naanị metụtara ịzụrụ ịntanetị ma ọ metụtara ịzụrụ ihe na ụlọ ahịa.
Anyị na-akwado ka ị laghachi ihe site na usoro mkpuchi yana usoro egwu, dịka nnyefe Royal Mail Recorded. Biko cheta inweta ihe nnata nke ụgwọ nnata. Biko mara na enweghị ike ịta anyị ụta maka ihe ọ bụla nke na-efu na post ma ghara iru anyị. Ọ bụrụ n ’iji Royal Mail Recorded ma ọ bụ nzipu puru iche ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na anyị natara ngwugwu gị site na iji akara weebụsaịtị Royal Mail na akara.
Iji mee ka anyị nwee ike ịhazi nloghachi gị nke ọma, biko zipụ ihe mkpuchi mkpuchi na ngwugwu. Pease kọwaa ma ịchọrọ mgbanwe ma ọ bụ nkwụghachi, ihe kpatara ịlaghachi, ma cheta itinye nọmba iwu gị na nkọwa kọntaktị onwe gị ka anyị wee nwee ike ịbịakwute ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla.
Mgbe anyị nwetara ngwaahịa eweghachitere anyị maka nkwụghachi ma nwee afọ ojuju na ọnọdụ ya yana ihe kpatara nloghachi, anyị ga-ahazi nkwụghachi gị maka ego niile akwụgoro maka ihe ahụ na-eji otu ụdị ịkwụ ụgwọ na akaụntụ ejirila maka ịzụta .
Biko rịba ama: ọ bụrụ na ị weghachite ihe agbanwere maka nkwụghachi, anyị debere ikike ịkwụ ụgwọ nchịkwa nke £ 10 iji kpuchie ụgwọ mmezi anyị.
+ MAGHACHI AJOLJOL NDOL ỌROL
Ọ dị mkpa iji dejupụta akwụkwọ nloghachi?
Anyị na-akwado ka ị dejupụta akwụkwọ nloghachi. Biko rịba ama ma ọ bụrụ na eweghachitere ihe na-enweghị mpempe akwụkwọ na-abịa, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị na ekwentị ma ọ bụ email iji chọpụta ihe kpatara nloghachi ahụ. Ọ bụrụ na anyị anụghị ozi gị n'ime ụbọchị 30, anyị nwere ikike ịlaghachikwute gị ihe ahụ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ihe ahụ eruo, hazie nkwụghachi na mwepu ego nchịkwa £ 10.
Kedu ọrụ m kwesịrị iji weghachite ihe?
Anyị na-akwado ka ị weghachi ihe site na usoro mkpuchi yana traceled, dị ka Royal Mail Recorded ma ọ bụ nzipu puru iche. Biko cheta inweta ihe nnata nke ụgwọ nnata. Biko mara na enweghị ike ịta anyị ụta maka ihe ọ bụla nke na-efu na post ma ghara iru anyị. Ọ bụrụ n ’iji Royal Mail Recorded ma ọ bụ nzipu puru iche ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na anyị anatala ngwugwu gị site na iji akara na akara aka websaịtị Royal Mail.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe maka nkwụghachi ụgwọ m?
Biko kwe ka 10-15 rụọ ọrụ ụbọchị mgbe nnata maka nkwụghachi na mgbanwe niile ga-ahazi. Ọ bụrụ na ịnabataghị nkwụghachi gị n'ime ụbọchị iri na ise nke anyị natara ngwaahịa gị, biko kpọtụrụ anyị site na emailing sales@sarmsstore.co.uk.
Ogologo oge ole ka azụtara m ịzụta ihe m nwere ike?
Biko gbaa mbọ hụ na ị weghachitere ihe gị n’ime ụbọchị iri atọ ị zụtara ahịa.
Ọ bụrụ na eweghachite ihe mgbe oge a gasịrị, anyị nwere ikike anyị ịjụ nkwụghachi mana anyị nwere ike ịdị njikere ịnye mgbanwe, dabere na ihe dị na ọnọdụ adịghị mma. Ihe ga-eweghachi na otu ọnọdụ e zigara ya.
Ọ bụrụ na ngwaahịa m mebiri ma ọ bụ mebie?
Ọ bụrụ na ịnwere ngwaahịa nke mebiri emebi ma ọ bụ na ọ bụghị nke ị nyere iwu mgbe ahụ ị nwere ike weghachite anyị n'efu maka mgbanwe ma ọ bụ nkwụghachi zuru ezu n'ime ụbọchị 30 ị natara ya.
Ọ́ bụrụkwanụ na m chọrọ iweghachi ihe m zụrụ site na saịtị cashback?
Enwere ike ịghaghachi ihe ndị a zụtara site na ebe nrụọrụ weebụ cashback n'ime otu ụbọchị 30, mana agaghị akwụ ụgwọ ego na iwu ndị a.
Gịnị ma ọ bụrụ na m nweta a free onyinye na m zụọ?
If chọọ ịlaghachi n’ihe e nyere gị n’efu, ị ga-eji ihe ahụ weta onyinye gị.
+ Mgbanwe amụma AJCHJCH
Anyị ga-eji obi ụtọ gbanwere ihe gị ọ bụrụhaala na eweghachitere ya n'ọnọdụ dị oke mkpa ma mejupụta njirisi maka ịlaghachi otu ihe edepụtara na Usoro Nloghachi anyị dị n'elu.
Esi gbanwere ihe
Soro otu usoro akọwapụtara na usoro nlọghachi anyị. Biko dejupụta akwụkwọ nloghachi ma gwa anyị ihe ị ga-achọ ịgbanwe maka ya yana nkọwa kọntaktị dị mkpa, ọ bụrụ na anyị ga-akpọtụrụ gị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ọdịiche dị na ọnụahịa?
Ọ bụrụ n’onwere ego akwụ ụgwọ, anyị ga-akpọtụrụ gị ka akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na enwere nkwụghachi azụ maka nke a, a ga-akwụghachi ya na kaadị ị jiri maka azụmaahịa izizi na-enye iwu ka eweghachitere anyị n'ime ụbọchị 30.
Enwere ego nchịkwa?
Ọ bụrụ na ị na-agbanwe maka ihe nke uru dị ala mgbe ahụ, anyị nwere ikike itinye ego nchịkwa £ 10 na ọnụahịa nke ihe nnọchi. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, anyị ga-akpọtụrụ gị iji gwa gị nke a.